Qalabka xayndaabka mesh
Silig bir kaarboon hooseeya
Habka wax soo saarka ee xayndaabka mesh silig
Tolmo iyo alxan
Astaamaha deyrka mesh silig
Daxalka ka-hortagga, gabowga ka-hortagga, caabbinta qorraxda, caabbinta cimilada iyo sifooyin kale. Noocyada dusha sare ee ka-hortagga daxalka ee ilaalinta waxaa ka mid ah koronto-samaynta, dhejinta kulul, buufinta caagga ah iyo ku-miridda caagga ah.
Habka rakibida ee xayndaabka mesh:
Xayndaabka mesh xayndaabku wuxuu ku rakiban karaa boosteejo labajibbaaran, boostada DM, boostada Pech, boostada wareegsan, Panel Panel oo leh qaloocyo ayaa ka dhigi kara mid xasilloon oo ans sronger ah.
midabka caadiga ah: cagaar RAL6005, madow RAL9005, caddaan RAL9010
Daaweynta dusha sare ee dahaarka leh ee PVC/PE waxay yeelan doontaa midabyo kala duwan, waxay ka dhigi doontaa xayndaabka Wire Mesh ee alxanka u muuqda mid qurux badan oo ka-hortagga miridhku.
Tilmaamidda xayndaabka mesh silig
Gal + budada Dahaarka leh 50*200mm
Gal + PVC Dahaarka leh 55*100mm
Isticmaal saamaynta xayndaabka siliga
(1) qaab-dhismeed macquul ah iyo shaqo aad u fiican.
(2)isku-duwidda muuqaalka iyo qaabka quruxda.
Ujeedada xayndaabka mesh:
Waxaa loo isticmaalaa ilaalinta tareenada ilaalinta waddooyinka, tareenada, garoomada diyaaradaha, meelaha la dego, dekedaha, dekedaha, jardiinooyinka, taranta, xanaanada xoolaha, iwm.
Hore: Aqoon-is-weydaarsiga aagga warshadaha ee Go'doominta
Xiga: Mesh alxanka dhismaha galvanized kulul
304 bir ah oo aan bir lahayn webiga birta birta ah ee birta birta ah ee birta ah
Tilmaamaha Alaabta Magaca Buundada Guardrail Material Stainless Steel Composite Pipe Midabka La Habeeyay Cabbirka Dusha Sare ee Dahaarka budada ah Feature Is-nadiifinta Faa'iidada 1.Isticmaalka ka hortagga daxalka iyo tignoolajiyada ka hortagga miridhku si loo kordhiyo nolosha alaabta. 2. Dusha sare waxay ka samaysan tahay bir aan lahayn oo waxay leedahay sifooyin is-nadiifineed oo wanaagsan. 3.Xilliga buundada waa sahlan tahay in la rakibo, ma fududa in la dhaawaco, waxay leedahay meelo yar oo xiriir ah oo xasilloon oo wanaagsan. 4.Buundada ilaalinaysa...
Khibradayada alaabada birta ee gacanta lagu sameeyo ayaa naga kasbaday sumcad la isku halayn karo oo xagga ganacsiga ah. Waxaanu iskaashi la samaynay shirkadaha guryaha dhisa ee gobolada iyo wadamada qaarkood si aanu u bixino farshaxanka birta oo habaysan ee guryaha, guryaha la dego, dhismayaasha ganacsiga, dugsiyada, kulliyadaha, jaamacadaha, cusbitaalada iyo suuqyada laga dukaamaysto. Waxaan bixinaa noocyo kala duwan oo albaabbo bir ah oo been abuur ah oo leh muuqaal casri ah iyo xoog sare. Baaxadda la siiyay waxay waafaqsan tahay qaab-dhismeedka casriga ah...